Ummeli weenkonzo zokuhambisa kwihlabathi liphela | Inkonzo yokuhambisa yase-China kwihlabathi liphela ukuSouring kunye noMrhwebi
Ukuthumela ngenqanawa kwindawo yokugcina izinto i-Amazon FBA kubalwa njengokungenisa kwe-B2B kwilizwe ekuyiwa kulo. Ngaba ungaphandle kwe China ufuna ukuthumela uluhlu lwezinto kwindawo yokugcina izinto yaseazon? Unokukhathaza ukuba abavelisi bangaze balungiselele ukuthunyelwa kwe-FBA kwaye kufuneka ucacise kaninzi. Kwakhona ukungeniswa kwamazwe aphesheya kuyinkimbinkimbi kwaye kuhlala kuyingxaki yentloko. Ngoku silapha ukukunceda. Sinikezela abathengi ngenkonzo yokuthatha umqhubi kwizixeko ezikhulu e-China, pr ...
Umgca ngokuthe ngqo Ngokusebenzisana nemithombo yeenqwelo-moya ezinzileyo yaseHongkong kunye neenqwelomoya ezikhokelela kwihlabathi kumazwe aseYurophu naseMelika, iSunsonExpress Direct Line yindibaniselwano yokuchaza kunye neposi kwimo yeDDP (Yazisa umsebenzi uhlawulelwe). Sisebenzisa inqwelomoya ethe ngqo ukusuka eHongkong ukuya kwisango lokufika yonke imihla kwaye sibamba kwangolo suku kususwe isiko. Yi-100% yolawulo olupheleleyo kuthutho lomoya kwaye ukuhanjiswa kweemayile zokugqibela kuyafumaneka sisisombululo kwezoqoqosho ngonikezelo olukhawulezayo ikakhulu ...
Isisombululo sokuthumela ngeposi Siqonda ngenene ukuba isisombululo seposi sihlala sikhetho lwangaphambili kwishishini le-e-commerce njengoko lisonwabela iqondo eliphantsi. Ukwanelisa ibango lomrhwebi ohlukeneyo, sisebenza ngeofisi ezininzi zeposi kule minyaka idlulileyo kwaye siqhubeka nokuphelisa inkonzo embi amaxesha ngamaxesha. Ngoku ezinye zezona zilungileyo. I-China Post i-China Post yahlulwe yaziipasile zomhlaba kunye neepasile ezibhalisiweyo. Yinkonzo yepasile yamanye amazwe yeepasile ezinobunzima obungaphantsi kwe-2KG. China ...
Inqanawa yeNkonzo yokuBonisa ngeakhawunti yakho ebonakalayo iyabiza kakhulu? Ke kutheni ungathumeli ngevolumu yethu? Sinikezela abathengi ngenkonzo efana ne-DHL, i-UPS kunye ne-EMS ngamaxabiso ezaphulelo. Ukuhanjiswa okukhawulezayo kumanqanaba ezoqoqosho, kufanelekile ukuba uyisebenzise. I-DHL yinkxaso-mali yeDeutsche Post DHL, iqela elidumileyo leposi kunye nelezothutho. Oku kubandakanya ikakhulu iiyunithi zeshishini ezilandelayo: I-DHL Express, ukuThunyelwa kweLizwe kwe-DHL, ukuhanjiswa kwempahla kunye ne-DHL yokuThengiswa. Ngo-1969, i-DHL yavula i-expre yabo yokuqala ...